Roobab ka curta Deegaano ka mid ah gobolada Juubooyinka, xili ay jirtao Abaar – SBC
Roobab ka curta Deegaano ka mid ah gobolada Juubooyinka, xili ay jirtao Abaar
Posted by editor on July 18, 2011 Comments
Roobabkan oo saacadihii ugu dambeeyay curtay ayaa waxay ka curteen Deegaanada Afmadoow, Qooqaani, Xagar iyo Bu’aale oo ka wadatirsan gobolada jubooyinka .
Qaar ka mid ah xoolo dhaqatada deegaanadaas oo ay SBC International la hadlay ayaa xaqiijiyay in roobabkaasi ay deegaanadaasi ka curteen islamarkaana si aad ah looga dareemayo circa cusboonaan iyo daruur biyo wadata oo dultaagan.
MAxamed Cali Faarax waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada Birta dheer waxaana uu sheegay in roobabka ay si aad ah uga curteen deegaanka Afmadoow iyo aagaga Miyiga ah ee ku xeeran wallow aysan aheyn roobabkaasi kuwo waaweyn .
Inkastoo dadka xooladhaqatada badigood ay u carareen deegaanada xeraha qaxooti ee dalka Kenya ayaa hadana waxaa ay siweyn uga raji qabeen in ay curandoonto rasmada Alle oo iminka u bilaabatay.
Sidoo kale saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaa Roobabka ay ka da’ayeen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose iyo deegaano badan oo ku heeran, waxaana roobabkaasi ahaayeen kuwo siweyn loogu diirsaday.
Roobabkan Curtay ayaa waxay ku soo aadayaan xili deegaanada ay ka de’een ay ka taagneyd abaar aad iyo aad u daran oo saameyn balaaran ku yeelatay umadii halkaasi ku dhaqnaa kuwaas oo ku qasbay in ay ka barakacaan deegaanadooda iyagoona tiigsaday goobo xeryo qaxooti ah iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka sida caasimada dalka ee Muqdisho.
C/qani Maxamed Cali